सपनामा आफैँ यस्ता काम गरेको देखियो भने ? अशुभ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सपनामा आफैँ यस्ता काम गरेको देखियो भने ? अशुभ
सपनामा आफैँ यस्ता काम गरेको देखियो भने ? अशुभ
काठमाडौँ । सपना र निद्राको आपसमा गहिरो र पुरानो सम्बन्ध छ। जब एक व्यक्ति निदाउँछ ऊ आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्व छोडेर कल्पनाको संसारमा हराउँछ। वास्तवमा त्यसैलाई सपनाको संसार भनिन्छ। निद्राको समयमा कस्तो प्रकारको सपना देखिन्छ भन्ने बारेमा केही भन्न सकिदैन। तर सपनाहरुले भविष्यमा हुने केहि कुरालाई संकेत गर्छ।
केहि सपनाहरुले पैसाको फाइदाको बारेमा संकेत दिन्छ भने केहि सपनाले प्रेम सम्बन्धको बारेमा संकेत दिन्छ। यस्तै केहि सपनाहरु यस्ता पनि हुन्छन् जसले मानिसलाई संकेत दिन्छ कि कोहि भविष्यमा नराम्रोसँग बिमारी हुन सक्छ वा ठुलै रोग लाग्न सक्छ।
सपनामा आफैँ यस्ता काम गरेको देखियो भने ?
यदि तपाईंले सपनामा तेल, दूध, दही, घिउ आदिले मालिश वा सेवन गरेको देख्नुभयो भने यसको संकेत यो हुन्छ कि तपाईंलाई चाँडै नै गम्भीर रोग लाग्न सक्ने सम्भावना छ। यदि तपाईलाई यस्तो सपना आयो भने तपाईले चिकित्सकसँग आफ्नो जाँच गर्नु जरूरी हुन सक्छ ।
यस्तो सपना देखेपनि बिमारी हुन सक्नेछ:
सपनामा, यदि कुनै व्यक्तिले रातो चन्दन लगाएको देखिन्छ वा नुहाइरहेकी आइमाईलाई अँगालोमा रहेको देखिन्छ वा कसैलाई हाँस्दै-गाउँदै गरेको देख्छ भने त्यो व्यक्ति गम्भीर रोगको शिकारमा पर्न सक्छ। यस बाहेक, यदि तपाईले आफ्नो सपनामा भयानक आकार भएका व्यक्ति देख्नु भयो भने तपाई बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ।
सपनामा भिक्षु देखियो भने ?
सपनामा, यदि तपाईले जटाधारी भिक्षुलाई देख्नुभयो, तपाईको शरीरका अंगहरूमा घाँस उम्रिएको देख्नु भयो, आफ्नो शरीरमा दुध र महको लेप प्रयोग गरेको देख्नुभयो भने निकट भविष्यमा बिरामी हुन सकिने संकेत हो ।
सपनामा स्त्री देखियो भने ?
सपनामा, यदि तपाईले कुनै महिलालाई कालो लुगा लगाउँदै गरेको देख्नुभयो वा कुनै महिलाले मानिससँग सम्बन्ध राख्दै गरेको देख्नु भयो भने तपाई निकै सतर्क हुन पर्छ। किनभने यो नराम्रो संकेत हो र यस्तो सपना देखेमा भविष्यमा आफ्नो शरीरमा केही रोगहरू देखा पर्न सक्छ।
निकै नराम्रो हुन्छ यस्ता सपना
यदि तपाईले सपनामा कसैले नङ वा कपाल काटेको देख्नुभयो भने यसले भविष्यमा आउने नराम्रो समयलाई संकेत गरेको बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै, सपनामा पानी वा जलाशय देख्नु पनि शुभ मानिदैन। यस्तो सपनाले निकट भविष्यमा देखा पर्ने ग(म्भीर रोगहरुलाई संकेत गर्छ।
सपनामा सर्प देखियो भने क हुन्छ त ?
सपनामा सर्प , बाँदर वा भालु इत्यादि देख्नु भनेको निकट समयमा देखा पर्न सक्ने रोगहरुलाई संकेत हो। यस्तै, सपनामा रोइरहेकी महिला वा केटी देख्नु पनि धेरै अशुभ संकेत हो। यस्तोमा तपाईको घरमा ठूलो समस्या हुन सक्छ वा तपाईं गम्भीर रूपमा कुनै रोगबाट ग्रस्त हुन सक्नुहुन्छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट आज थप ११ सय ५४ जनामा संक्रमण पुष्टि
भि रबाट ल’ डे र बुबाको मृ’ त्यु भएपछि बि’ चल्लीमा परेका म्याग्दीका दुई बालिकाको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणका लागि माइती नेपाल ले जिम्मा लियाे !
प्रतिनिधिसँग देउवाको आग्रह : मैले हारेँ भने मलाई प्रधानमन्त्री बाट हटाउँछन् त्यसैले मलाई जिताइदिनुस्